Soo dejisan Ashampoo Burning Studio FREE 1.14.5 – Vessoft
Soo dejisan Ashampoo Burning Studio FREE
Ashampoo Gubidda Studio BILAASH – software shaqaynaysa in ay la shaqeeyaan CD, DVD iyo Blu-Ray cajalladaha. Ashampoo Gubidda Studio BILAASH ka kooban qalab in la abuuro ama aad nuqulka xogta ku saabsan cajalladaha oo awood u siineysaa inay sanamyadooda la shaqeeyaan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qoraan ama badalo music, filimada rikoor iyo in la abuuro ama diyaariyo CD daboolayaa daabacayo. Ashampoo Gubidda Studio BILAASH awood u siineysaa inay faylasha gurmad oo uu ku sameeyo dib u soo kabashada xogta. Software waxay leedahay interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
La shaqee CD, DVD iyo Blu-Ray cajalladaha
Samee cajalladaha la heeso iyo filimaan
Kaabta iyo soo celinta xogta
Comments on Ashampoo Burning Studio FREE:
Ashampoo Burning Studio FREE Software la xiriira:
MiniTool Partition Wizard 9.1 Home Edition iyo Professional Edition
Nero 2016 21.09.2015 Nero Burning ROM iyo 2016 17.09.2015 Classic
English, Français, Español, Deutsch... DAEMON Tools Lite 10.3.0.0152
Saxannada Agabka in la abuuro sanamyada disk iyo drives dalwaddii xaasidnimo. Software wuxuu taageeraa qaabab loo jecel yahay image oo uu leeyahay hab ee circumvention kala duwan ee ilaalinta nuqul.
English, Українська, Français, Español... CDBurnerXP 4.5.7.6321
Saxannada software The lagu shido, CD DVD, HD-DVD iyo Blu-Ray. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan faylasha ISO iyo cajaladaha Downlaods.
العربية, English, Українська, Français... UNetbootin 625
Saxannada Software ayaa u heelan nidaam Linux qalliin ku flash ama drive adag. Software wuxuu taageeraa ugu ah qaybinta Linux, la nooc oo kala duwan oo ah nidaamka ka.
WinToFlash 1.4.0000 beta Lite, Personal, Professional iyo Business
Saxannada Agabka in la abuuro bootable flash drives. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan faylasha rakibo ku socota xogta loogu rakibo ee software ama nidaamka qalliinka.
العربية, English, Français, Español... Alcohol 120% 2.0.3.9326
العربية, English, Українська, Français... CrystalDiskInfo 7.0.4
Saxannada software The si aad u hubiso xaaladda iyo heerka ka mid ah drives Oxperts adag. software soo bandhigayaa macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan tilmaamayaasha kala duwan farsamada ee cajaladaha ah.
العربية, English, Українська, Français... Nimbuzz 2.9.5
Isgaarsiinta Voice Ku haboon qalab si ay ula xiriiraan taageerada adeegyada caanka ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod, farriimaha qoraalka iyo sarrifka files.
العربية, English, Français, Español... KMPlayer 4.1.3.3
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka MFT oo taageero ka mid ah qaabab warbaahinta caan ah. software wuxuu bixiyaa loo maqli karo oo tayo sare leh oo ah files warbaahinta iyo shaqo la subtitles ah.
العربية, English, Українська, Français... AIDA64 Extreme 5.60.3700 Standard iyo Portable
Imtixaanka Aaladda si ay u tijaabiso iyo falanqaynta awoodaha nidaamka. Software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan qayb ka hardware computer.
العربية, English, Українська, Français... SmadAV 11
Antiviruses Tool in la ogaado oo meesha laga saaro fayrusyada ama hanjabaad kala duwan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo saarto noocyo kala duwan oo ah fayrasyo ​​iyo hagaajin dhibaatooyin diiwaanka nidaamka cudurka.